» नक्कली डीभीडी बनाएर बेच्ने चार पक्राउ
» बीमा कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस वितरण गर्न नपाउने
४ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाका बिभिन्न शहरमा महजात्रा देखाउदै हिडेका मह जोडीलाई न्यूयोर्कमा आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिले अवरोध सिर्जना गरेपछि उनीहरुले तयार पारेको कागजमा...
» रिसोर्टमा बैठक गर्नु आपत्तिजनक : कमल थापा
» दिल्लीमा कान जाँचेर फर्केका राणाले भने- नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ
» संवाद समितिको म्याद कात्तिक १५ सम्म थपियो
» केपी ओलीलाई सहमतिभन्दा आफ्नै हातको चिन्ता
» गोल गरेको खुसीमा खेलाडीको मृत्यु
महाकवि देवकोटालाई स्रष्टाले सम्झिए
नेपाल-भारत उर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर
४ कात्तिक, दैलेख । दैलेख सदरमुकाम नजिकै बिनी खोलामा जीप खस्दा मंगलबार दिउँसो ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १८ जना घाइते...
ठूला चाडपर्वका अबसरमा आफ्ना कर्मचारीलाई उपहार दिनु अनौठो हैन् । तर, कुनै कम्पनीले एकैपटक १२ सय कर्मचारीलाई कार, घर र गहना जस्ता महंगा र...
खैरो हिरोइनसहित सुरेन्द्र साह पक्राउ
प्रहरी चौकी बनाउन जग्गादान
४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानसभा चलिरहेका बेला तीन दलका नेताहरु रिसोर्टमा जानु संविधानसभाकै घोर अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका...
४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिममशेर जबरा लामो समय दिल्ली बसेर नेपाल फर्केका छन् । दिल्लीबाट कानको उपचार गरेर फर्केका राणाले...
४ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरुले कात्तिक १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा पाएका छन् । मंगलबारको संविधानसभा बैठकले नयाँ संविधान लेखनका...
गोल गरेको खुसीमा खेलाडीको मृत्यु
निर्णायक वार्ता गर्न तीन दलका नेता गोकर्ण रिसोर्टमा
जब ओबामाको क्रेडिट कार्डले काम गरेन ….
कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होडबाजीले सत्ता गठबन्धन हल्लियो
काठमाडौ । यसपालीको तीहारमा कबिबर माधवप्रसाद घिमिरे, संस्कृतिबिद् सत्यमोहन जोशी र तुलसी दिवस लगायतका अग्रज स्रष्टा देउसी कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन् । नयाँ...
नेपाली सिने उद्योगमा हल्लाखल्ला बढि गर्ने तर काम नगर्ने प्रबृत्ति एउटा रोगकै रुपमा फैलिएको छ । तामझामपूर्वक सिनेमाको नाम र कलाकार घोषणा गर्ने निर्माता...
रेड कार्पेटमा यस्ता देखिए हिरो-हिरोइन(फोटो फिचरसहित)
नेफ्टा अवार्डका लागि राजेशदेखि करिश्मासम्म हङकङमा
दीपक र विल्सन अंगालोमा, किन मिल्यो सम्बन्ध ?
काठमाडौं । बलिउड नायिका जरिन खान र एजाज खानले नेपाली र्‍याम्पमा क्याटवाक गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएकी जरिन र एजाजले होटल सोल्टीमा आयोजित...
मुम्बई । अभिनेत्री दिया मिर्जाले बैबाहिक सम्बन्ध गाँसेकी छिन् । आफ्नो प्रेमी एवं ब्यबसायी साहिल सिंघासंग बिबाह गरेकी दियाको हिन्दु परम्परा अनुसार बिबाह सम्पन्न...
ऋतिकसँग खेल्ने हिल्टनको चाहना
अजय देबगण निर्देशक बने
तस्बिरमा हङकङको नेफ्टा अवार्ड
‘सातौ नेफ्टा फिल्म अवार्ड’ हङकङमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघको आयोजनामा एस.के प्रोडक्शनको सहकार्यमा अवार्ड आयोजना गरिएको हो । हङकङको ‘वीपी इन्टरनेशनल होटल’को भव्य हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा ३१ विधामा अवार्ड वितरण...
यू-१९ क्रिकेट टोलीको कप्तानमा राजु रिजाल